गर्लफ्रेण्डकी छोरीलाई बलात्कार गर्नेलाई १६० वर्ष जेल ! – Everest Dainik – News from Nepal
गर्लफ्रेण्डकी छोरीलाई बलात्कार गर्नेलाई १६० वर्ष जेल !
एजेन्सी । पछिल्लो समयमा हाम्रो देशमा बलात्कारका जघन्य अपराधका घटनाहरु बढिरहेका छन् । उता विश्वको सबैभन्दा विकशित तथा शक्तिशाली देश अमेरिका पनि बलात्कारको मामिलामा कम छैन । हालै त्यहाँ एकजना पुरुषले बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा १ सय ६० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको खबर प्रकाशमा आएको छ ।
ट्याग्स: america, निकोलस डिओन